EPL: Kooxaha Manchester City iyo Tottenham Hotspur oo barbaro ku galay garoonka Etihad… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Kooxaha Manchester City iyo Tottenham Hotspur oo barbaro ku galay garoonka Etihad… + SAWIRRO
Haaruun January 21, 2017
(Manchester) 21 Jan 2017 – Kooxaha Manchester City iyo Tottenham Hotspur ayaa barbaro 2-2 ku galay garoonka Etihad kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Laakiin markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta Man City ayaa goolasha la horreysay oo la timid labo gool oo deg deg ah, waxaana goolka hore u dhaliyey 49’daqiiqo Leroy Sane, kaddib markii uu ka tagay goolhayaha Spurs waxaana uu kulanka ka dhigay 1-0 ay ku gacan sarreysay Sky Blue.
Man City oo mininkeeda joogtay ayaa kulanka hoggaanka u dheereysay waxaana 54’daqiiqo kubbad uu goolhayaha Tottenham si fiican u qabsan kari waayey dhammaystiray Kevin de Bruyne, Man City ayaa hoggaanka ciyaarta ku qabtay 2-0.
Tottenham labadaas gool ayaa hurdada ka toosiyey, waxaana goolka hore u keenay 58’daqiiqo Dele Alli oo madax ku dhammaystiray kubbad dadab laga soo qaaday, kulanka ayuuna ka dhigay 2-1 looga gacan sarreeyey kooxdiisa.
Spurs oo marti ahayd ayaana la timid goolka barbaraha 78’daqiiqo, waxaana kubbad uu soo dhiibay Eriksen oo uu cirib ku wareejiyey Harry Kane, si wacan u dhammaystiray Heung-Min Son, kulanka ayaana ku soo dhammaaday barbaro 2-2.
GOOGOOSKA: AC Milan vs SSC Napoli 1-2 (Milan oo khaladkeeda laga bilay)
Real Madrid oo loo caleemo saaray Horyaalka La Liga ee wajiga hore iyadoo uu kulan u harsan yahay…..(Maxay uga dhigan tahay????)